Wasiirka Arrimaha Guddaha oo la kulmay Jaalliyada London | Somaliland.Org
Wasiirka Arrimaha Guddaha oo la kulmay Jaalliyada London
October 27, 2009	Wasiirka Arrimaha Guddaha oo la kulmay Jaalliyada London London (Jam)- Xaflad balaadhan oo qado sharaf ah, laguna soo dhaweynayay Wasiirka Arrimaha Guddaha Somaliland Md. Cabdilaahi Ismaaciil (Cirro), ayaa maalintii Axadda ee toddobaadkan, lagu qabtay hool ku yaala xaafada Harrow ee Galbeedka magaalada London. haddaba warbixinta waxaa inooga diyaariyay Jamhuuriya Times London Kullanka oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen qaybaha kale duwan ee bulshadu, ayaa waxa lagu furey aayado quraanka kariimka ah oo uu halkaasi ka akhriyay Xasan Xeego oo ka mid ah Odayaasha Xaafadda, kadibna waxa haddalo mahadnaq iyo soo dhawayn isugu jira ka soo jeediyay oday Xuseen Axmed Guuleed. Wasiirka Arrimaha Gudaha Md. Cabdilaahi Ismaaciil Cali (Cirro) oo madasha ka hadlay, ayaa ugu horrayn u mahadnaqay Jaaliyada reer UK, waxaannu ku tilmaamay safarkiisa mid gaar ahaaneed, inkastoo oo uu sheegay inuu la kulmay saraakiisha ciidanka booliska ee magaalada Sheffield iyo xubno baarlamaanka dalka Ingiriiska ka tirsan.
Intaasi ka dibna waxa uu si aada uga warramay waxqabadka waaxyaha kale duwan ee Wasaarada Arrimaha Guddaha, gaar ahaan dhinacyada Booliska, Ciidanka ilaalada xeebaha iyo Qaybta Miino saarka iyo la dagaalanka aragagixisada. Sidoo kale waxa uu Md Cirro ku dheeraaday taageerada ay hay’adda UNDP-du siiso wasaarradiisa, taasi oo inta badan waxqabadka Wasaarada Arrimaha Guddaha laf-dhabar u ah iyo sarakiil kale duwan oo tababaro ku soo qaatay dalalka jaarka iyo kuwo kale oo ka soo qallin jabiyay Jaamacadaha Hargeysa iyo Gollis, kuwaasi oo dhamaantood uu sheegay in ay wax wayn ka tari doonaan hawlaha Ciidanka Booliska, isaga oo Cabdilaahi hadalkiisii sii watana waxa uu xusay in dhawaan ay dalka ka furi doonaan kulliyad lagu tababari doono saraakiisha cusub ee Boliska. Waxaa kale oo uu wasiirku tilmaamay in ahmiyada ugu weyn ee wasaaradiisu ay tahay sugida amaanka qaranka, waxaana uu sheegay inay fashiliyeen falal badan oo argagixiso oo dalka Somaliland lala maaganaa in lala beegsado tan iyo intii ka danbaysay weerarkii aragagixiso ee sannadkii hore ka dhacay Somaliland.
Md. Cirro waxa warbixintiisa ku xusey in shaqaaqooyinkii dhawaan dalka ka dhacay oo ku macneeyay in had iy jeer la soo abaabulo banaanbaxyo aan fasax loo haysan oo aan Booliska la wargalin, kuwaasi oo waa sida uu hadalka u dhigaye ay mararka qaarkood suurtagal tahay in ay ku soo dhuuman karaan cadawga Somaliland sida dhacdadii banbaanada lagu qarxiyay ee isu soo bixi u danbeeyay ee Hargeysa.
Wasiirka oo ka waramayay xidhiidhka dibeda ee wasaaradiisuna waxa sheegay in ay xidhiidh wada shaqayn oo dhaw ay la leeyihiin dalal badan oo dunida ka mid ah sida Yamen, Jabuuti, Itoobiya, Ingiriiska, Maraykanka iyo dalal kale oo dunida ka mid.
“Shir ka dhacay dalka Yamen oo lagaga hadlayay arrimaha budhcad badeedka Somaliland si aada ayaa loogu ammaanay waxaana aanu u caddeynay in dalkayaga nin badda wax ku soo dhacaa aanu barriga ku nabadgalayn sidaa daraadeedna aanay budhcad badeedku meel ay nabad galaan aanay Somaliland ku lahayn,” ayuu yidhi Cabdillaahi Cirro.
Wasiirka arrimaha Guddaha waxa kale oo uu sheegay in xukuumadda ahaan ay dhankooda ka soo dhamaystireen darajo siinta ciidamada dhawaana golaha wasiiradu la hor keeni doono si loogu gudbiyo baarlamaanka. Waxaanu intaasi ku daray in Guddida nabadgalyada ee uu madaxda ka yahay aanay dadka dhinaca siyaasada u xidhxidhin, balse waxaanu qiray in dadka inta ugu badan ee ay xukunka ku ridaan yihiin tuug iyo qaar dadkoodu yidhaadeen noo xidha.
“Gudiyada nabadgalyadu dadka dhinaca siyaasadda uma xidhxidhaan ee dadka aanu qabqabanaa waxay u badan yihiin tuug iyo qaar eheladoodu yidhaahdaan noo xidha,” ayuu wasiirku yidhi;
Gebogabadii shirka oo ka qaybgalayaasha shirka laga codsaday inay qoraal ahaan su’aalahooda ku soo gudbiyaan, ayaa noqotay mid dadweynuhu qaar si aad ah uga cadhoodeen kadib markii su’aalihii loogu tallogalay wasiirka aan la weydiin, marka laga reebo dhawr su’aalood.
Waxaa shirka xidhiidhnayay Cabdiqani Cismaan Saban